प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख १ गतेबाट रक्सी छाड्ने कुरा गरे, छाडे होलान् । पौडीखेल्ने पोखरीभन्दा बढी पिएपछि पिउन छाडे, कसका लागि ? देशका लागि होइन, ‘मेरो वर्ष: म स्वस्थ’ भन्नका लागि । यद्यपि उनले ‘मेरो देश स्वस्थ’ भन्ने नारा लगाउन चाहिं बिर्सेनन् । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग हात मिलाएर रक्सी नपिउने बताए । रक्सी नपिउन पनि भद्रो हेर्नुपर्ने ? कस्तो अचम्म ? बरु भ्रष्टाचार गर्दिन भनेको भए लोक खुशी हुनेथिए, प्रशासन सुधार हुन्थ्यो कि ? किनभने देशको समस्या रक्सीभन्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । जुन सरकारले गरिरहेछ ।
प्रधानमन्त्रीले ५ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । म रक्सी, चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ खान्न, म नियमित व्यायाम गर्छु, म स्वस्थ पोषिलो, खाना खान्छु, म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु तथा म र मेरो परिवार समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छौं ।
रक्सी, चुरोट हुनेले खाने हो, नहुनेले त खोले पनि खान पाएका छैनन् । नियमित व्यायाम हुनेका लागि हो, नहुनेले त तालुको पसिना खुट्टामा पुगुन्जेल दैनिक काम गर्नैपरेको छ । पोषिलो खाना र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण पनि हुनेका लागि हो । नहुनेले कसरी खाने, कसरी डाक्टरी जाँच गराइरहने ? खोई नहुनेका लागि चिन्तन ?